Mibvunzo - FAQ - Xiamen NEWYEA Technology Co., Ltd.
Zvinodhura zvakadii kukodzera chiteshi chemagetsi chekuchaja mota?
"Mari yekumisikidza chiteshi chekuchaja mota
Imba EV Yekuchaja Chiteshi Mitengo
Mari yepasirese yenyika ($ 1,200)
Avhareji renji ($ 850- $ 2,200)
Mari yepasi ($ 300)
Mari yakakwira ($ 4500) "
Zvinodhura zvakadii kuisa yemagetsi mota yekuchaja chiteshi muIndia?
Kuisa charger inononoka kunogona kuita maRs 2-3 lakh zvichienderana nehunyanzvi, akadaro mukuru wehurumende.
Iwe unowana chiteshi chechaja kana iwe ukatenga mota yemagetsi?
Kuti ubhadharise mota yemagetsi pamba, iwe uchada pekuchaja pamba pawakaisa paunopaka mota yako yemagetsi, kana EVSE yekupa tambo ye3 pini plug socket seyakambodzoserwa kumusoro. Vanotyaira vanowanzo sarudza yakatsaurirwa imba yekuchaja poindi nekuti inokurumidza uye yakavakira-mukati chengetedzo maficha.
Ndeipi yakanakisa EV kuchaja chiteshi?
"Mupepeti Sarudza: JuiceBox Pro 40 ine JuiceNet. ...
Siemens VersiCharge Kumba Chaja. ...
Bosch Chikamu 2 EV Chaja. ...
ChargePoint Imba Flex WiFi Yakagonesa EV Charger. ...
Zencar Inotakurika EV Chaja. ...
Duosida Level 2 Inotakurika EV Chaja. ...
MUSTART Level 2 Inotakurika EV Chaja. ...
ClipperCreek HCS-40 EV Yekuchaja Chiteshi. "
Ndinofanira kuchaja mota yangu yemagetsi manheru ega ega?
Zvinoitika vatyairi vemotokari dzemagetsi vazhinji havana kana hanya nekuvhara husiku hwoga hwoga, kana hazvo kubhadharisa zvizere. Vanhu vane tsika dzekutyaira, uye kana zvichireva mamaira makumi mana kana makumi mashanu pazuva, ma plug-ins akati wandei pavhiki zvakanaka. ... Kune mamwe makumi mana muzana, vamwe vanogona kuchaja pabasa.
Ndinogona here kuisa Level 3 charger kumba?
Chikamu chechitatu chiteshi chekuchaja, kana DC Fast majaja, anonyanya kushandiswa mune zvekushambadzira nemaindasitiri marongero, sezvo achiwanzo kudhura zvisingaite uye anoda hunyanzvi uye hwakasimba michina kuti ishande. Izvi zvinoreva kuti DC Fast majaja haawanikwe ekuisa pamba.
Iwe unonyatso chengeta mari nemagetsi mota?
Tsvaga zvimwe pa www.energy.gov/eGallon. Plug-in yemagetsi mota (inozivikanwawo semagetsi magetsi kana maEV) inogona kukuchengetedza mari, iine yakaderera kwazvo mafuta mutengo paavhareji kupfuura zvakajairika peturu mota. ... Magetsi haadhure pane peturu uye maEV anoshanda zvakanyanya kupfuura mota dzepeturu.
Unogona here kuvhara mota yemagetsi mune yakajairwa kubuda?
Dzese mota dzinogadzirwa nemagetsi nhasi dzinosanganisira cheji yekuchaja iyo iwe yaunokwanisa kubaya mune chero chiyero 110v nzira. Chikwata ichi chinoita kuti zvikwanise kubhadharisa EV yako kubva kuzvitoro zvenguva dzose zvemhuri. Iyo yekudzikira yeEV kuchaja ne110v nzira ndeyekuti zvinotora kanguva.
Zvinodhura zvakadii kubhadharisa mota yako yemagetsi kuWalmart?
Zvakare standard Level 2, 240-volt majaja anowanikwa pamagetsi emagetsi uye plug-in mahybrids asina DC inokurumidza-kubhadharisa kugona. Mari yekushandisa zviteshi zvekuchaja mota yemagetsi masendi gumi nemaviri pa kWh - avhareji yenyika.
Mota dzemagetsi dzinozogara kwenguva yakareba sei?
"Hupenyu hweBhatiri Kutarisira
Bhatiri rega riri mumotokari yemagetsi rinotengeswa muUS rinouya newaranti inogara kweanosvika makore masere kana kusvika kumamirioni zviuru zana, anodaro CarFax.
Maitiro eChina akaisa angangoita mamirioni mashanu magetsi esimba mumugwagwa mune gumi gumi？
Pakupera kwa2020, chiitiko chakakosha chakazosvika apo mamirioni 4.92 emagetsi emagetsi matsva (NEVs), anosanganisira bhatiri emagetsi, plug-in hybrid, uye mota dzemota dzemota, dzaive dzichishanda mumigwagwa yeChina. Idzi dzaive 1.75% yehuwandu hwenyika yemotokari. Makore gumi apfuura, China yakanga yangoendesa zviuru makumi maviri zvemaNEV nyika yese, uye zvaingova makore masere chete apfuura kuti China yakatanga chirongwa chepakati-kwetemu chekusimudzira NEV chakanangana nemotokari dzinokwana mamirioni mashanu dzakatengeswa mukupera kwa2020. Izvi zvinoreva kuti makore gumi chete, huwandu hwevanhu veChina veNEV hwakakura neanosvika mazana maviri nemakumi mashanu akapetwa!